धेरै मात्रामा कपाल झरेर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसोभए यो तेल लगाउनुहोस् हप्तामै देख्नुहुनेछ फरक – Krazy NepaL
January 30, 2021 568
आजको युग फॅशनेबल छ र यही कारणले धेरै मानिसहरू आफ्नो कपालमा टिन्ट, ब्लीच, स्ट्रेटनर, र डाई जस्तो रासायनिक उपचार अपनाउँछन्। यदि तपाईं यस प्रकारको उपचारको साथ नयाँ रूप प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, कपाललाई धेरै प्रकारका क्षतिहरू दिन्छ। न केवल यसले तपाईंको कपाल कमजोर बनाउँदछ, यसले तपाईंको कपाल पनि झार्ने गर्दछ ।
Prevहत्केलाका यी ५ शुभ संकेत, मात्रै एउटा संकेतले पनि हुन्छ धन लाभ
Nextसूर्यसँग मिलेर बुधले बनायो शुभयोग, यी राशिको खुल्ने भयो भाग्य !
शास्त्र अनुसार मात्र एक कचौरा पानीबाट यसरी चम्किन सक्छ तपाईको भाग्य !
श्रीमान बिदेशमा श्रीमतीले नेपालमा गरिन् यस्तो १ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस्